Jesoa araka ny jodaisma - Wikipedia
I Jesoa dia heverin' ny fivavahana jiosy ho olona fotsiny fa tsy Andriamanitra na zanak' Andriamanitra akory aza. Antson' izy ireo amin' ny teny hebreo hoe יֵשׁוּ‎‎ / Yēšū i Jesoa. Ivom-poto-kevitra amin' ny jodaisma dia ny mahatokana sy ny maha hafa tanteraka an' Andriamanitra (Deoterônômia 6.4), ary ny fivavahana amin' ny olombelona dia heverina ho endrika fanompoan-tsampy. Noho izany dia mitsipaka ny fiheverana an' i Jesoa (na ny mesia jiosy hoavy) ho Andriamanitra, na ho mpanelanelana amin' Andriamanitra, na ampahany ao amina Trinite ny jodaisma.
Ny jodaisma dia milaza fa tsy mesia i Jesoa, satria sady tsy nahataneraka ny faminaniana momba ny Mesia voalaza ao amin' ny Tanakh izy no tsy nahitana ireo toetra mampiavaka manokana ny Mesia. Milaza ny Jiosy fa tsy nahatanteraka ireo faminaniana ny amin' ny hanamboarana ny Tempoly Fahatelo (Ezekiela 37.26-28), momba ny famerenana indray ny Jiosy ho any Israely (Isaia 43.5-6), momba ny famerenana ny fandriam-pahalemana (ny fiadanana) ety ambonin' ny tany (Isaia 2.4) ary ny fampiraisana ny olombelona rehatra eo ambany fahefan' ny Andriamanitr' i Israely (Zakaria 14.9) i Jesoa. Ankoatr' izany, araka ny lovantsofina jiosy, dia tsy misy mpaminany intsony aorian' i Malakia, izay nanolotra ny faminaniany taorian' ny taonjato faha-5 tal. J.K.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesoa_araka_ny_jodaisma&oldid=1010354"
Dernière modification le 27 Martsa 2021, à 12:36
Voaova farany tamin'ny 27 Martsa 2021 amin'ny 12:36 ity pejy ity.